Otú E Si Sụgharịa Baịbụl n’Asụsụ Jọjin
Akwụkwọ Matiu, Mak, Luk na Jọn a nọ n’obodo Mọkvi depụtaghachi n’asụsụ Jọjin n’agbata afọ 1301-1400
ASỤSỤ Jọjin so n’asụsụ ndị mbụ a sụgharịrị Baịbụl na ha. Ndị ọzọ bụ asụsụ Latịn, Siriak, asụsụ ndị Ijipt, Aminian, na ndị ọzọ. A na-ekwu na a sụgharịrị akwụkwọ Matiu, Mak, Luk, Jọn, akwụkwọ ozi dị iche iche Pọl dere, nakwa akwụkwọ Abụ Ọma n’asụsụ Jọjin n’ihe dị ka narị afọ anọ na iri ise Oge Ndị Kraịst, ma ọ bụkwanụ tupu mgbe ahụ. Kemgbe ahụ, ọtụtụ ndị nọ na-asụgharị ma na-edepụtaghachi Baịbụl n’asụsụ Jọjin. Ihe a mere ka e nwee nsụgharị Baịbụl dị iche iche n’asụsụ Jọjin. *
E si na Baịbụl nweta ihe ụfọdụ e dere n’akwụkwọ ndị Jọjia. Ndị Jọjia sikwa na ya mụta ihe ụfọdụ ha na-eme. Dị ka ihe atụ, e si na Baịbụl nweta ụfọdụ ihe e dere n’otu akwụkwọ kọrọ otú e si gbuo Eze nwaanyị Shushanik. E dere akwụkwọ a n’asụsụ Jọjin n’ihe dị ka narị afọ anọ na iri asaa na isii. Otu onye na-ede abụ aha ya bụ Shota Rustaveli dere àgwà ụfọdụ Baịbụl kwuru Ndị Kraịst kwesịrị ịna-akpa n’abụ o dere. O dere abụ ahụ n’ihe dị ka afọ 1220. O dere gbasara otú e si emeta enyi, otú e si emesapụ aka, na otú e si ele mmadụ ọbịa. Ndị Jọjia ka ji àgwà ndị a kpọrọ ihe.
^ para. 3 Ị chọọ ịgụ banyere otú ọtụtụ ndị si malite ịsụgharị Baịbụl n’asụsụ Jọjin, gụọ isiokwu bụ́ “Ọmarịcha Akwụkwọ A Chọwara Kemgbe Ọtụtụ Narị Afọ.” Ọ dị n’Ụlọ Nche Jun 1, 2013.